Inona no hitranga raha sendra sendra bisikileta ianao? - Mpitaingina Bisikilety
Tena > Mpitaingina Bisikilety > Inona no hatao raha mikapoka bisikileta ianao - ny fomba hitondrana izany
Inona no hatao raha mikapoka bisikileta ianao - ny fomba hitondrana izany
Inona no hitranga raha sendra sendra bisikileta ianao?
Lalàna sy adidy tokony hizarana izany
Raha mamely bisikileta ianaoamin'nynyfiara, ilay niharam-boina dia afaka nanao fitakiana na inona na inona avy amin'ny ratra manokana na fahasimban'ny fananana. Raha sendra namoy ny ainy ny olona iray dia mety hametraka fitoriana noho ny fahafatesany ny havany na ny mpahazo ny ainy.
(mozika elektronika) - Eny, eto Chambery isika ny maraina aorian'ny dingana Roubaix amin'ny Tour de France 2018 ary nanam-bintana izahay nandany antsasak'adiny niaraka tamin'i Dr. Kevin Sprouse, dokotera ao amin'ny ekipa EF Drapac. Kevin, misaotra betsaka tamin'ny fotoananao.
Azonao atao ve ny milaza amiko hoe inona ireo ratra dimy fahita matetika hitanao amin'ny mpamily? - Heveriko fa ny tampoka an-dalambe no laharana voalohany, ary indrisy fa hitantsika izany omaly ary zavatra iray izy io. Ataoko tsy tapaka io izao. Sarotra ny manisy laharana azy ireo amin'ny resaka fahita matetika satria misy an-tsokosoko io, saingy mieritreritra aho fa handeha mihoatra ny dimy izay hitako indrindra.
Noho izany, aretin'ny arabe, vaky taolana, ratra amin'ny hatoka, indrisy, maratra, avy eo olana amin'ny lohalika. Matetika ireo no mampiasa tafahoatra mitohy - ary noho izany andao hanomboka amin'ny halehiben'ny arabe raha tsy maninona. Fony aho mpamily dia nanao vazivazy foana izahay fa tsy misy dikany sy tsy misy fotony, tiako holazaina fa tsy misy dikany izany, saingy mety ho olana lehibe tokoa io, indrindra rehefa faritra midadasika izy io ary raha miteraka tsy fahazoana aina lehibe io dia mety hanova ny fomba fitondrana fiara izany.
Ary azonao lazaina amiko fotsiny ve ny fomba fiatrehanao ny fikafika arabe? - Azo antoka, amin'ny fitsaboana ny fahalavoana eny an-dalambe ity dia karazana zaza izay ny kitapom-batsy entiko miaraka amiko, mampiasa kasety fandidiana goavambe hitazomana azy amin'ny toerany isika. Omnifix no miaraka amiko, saingy azontsika atao ny mandray izay misy any amin'ny fivarotam-panafody rehefa lany. Fa kasety ampiasaiko izany, fantsona tsy miraikitra fotsiny ny fehy Telfa, zavatra azonao raisina mora foana amin'ny farmasia eo an-toerana.
Ianao angamba efa nahita an'io, karazana palitao mamirapiratra mba tsy hijanona amin'ny ratra izay manosotra menaka antibiotika telo fotsiny. Any Etazonia isika dia miantso an'ity Neosporin ity, ity dia kinova mahazatra fa apetrakao fotsiny eo io dia mandeha mahitsy amin'ny ratra Ampiasao izay efa hitanao angamba teo amin'ireo mpamily, ity harato fandrehitra ity. Ka io no tiako amin'ny bisikileta fito taona amin'ny bisikileta ary avy aiza izy rehefa lavo ary manizingizina fa apetrako amin'ny lohalika sy kiho izy.
Saingy mety efa hitanao izany tamin'ny mpitaingina ny peloton izay nanao fehikibo fotsiny. Hampiasainay betsaka amin'ny lohalika sy kiho, ireo faritra mihetsika tsy tapaka mandritra ny tongotra efatra ka hatramin'ny enina ora, raha tsy izany dia hanomboka hiovaova sy hivezivezy ity entana ity rehefa lasa hatsembohana ary hiafara amin'ny fatoranao hiala ary ho sosotra fotsiny mandry ary tazomy izany rehetra izany. Ary izany rehetra izany dia zavatra azonao alaina ao amin'ny fivarotam-panafody.
Raha te hahazo izany ianao dia tsy mila fahazoan-dàlana ara-pitsaboana manokana na inona na inona, mora be izany - noho izany ny taolan-koditra, manao vazivazy izahay amin'ny maha-bisikileta fa tsy tena mpitaingina bisikileta ianao mandra-pandranao ny taolan-tongotrao izay tsy marina. Fa tena izy kosa (mihomehy) - mbola manana ny ahy aho - maratra bisikileta mahazatra be izany, sa tsy izany? izany? - Izy io.- Voalohany indrindra, azonao atao ve ny milaza aminay kely momba ny antony? Misy ifandraisany amin'ny fampitana herinaratra ve izany, rehefa misy olona- Tena tanteraka, mihintsana ny tsingeriny.
Ary rehefa eo amin'ny bara ny tananao ary mandeha amin'ny hafainganam-pandeha ianao, dia matetika no hitanao indraindray eo ambonin'izy ireo ny fandehanan'ny Poloney, fa amin'ny ankamaroan'ny fotoana dia misy fomba fiasa iray tokony hialanao amin'ny fianjerana ary mihodina ny kodia, ary avy eo izy ireo midina amin'ny sisiny, ary ny fironana voajanahary, ny reflex, dia ny manatratra azy ary io hery io dia hifindra miakatra, ary matetika eo amin'ny taolana, izay karazana taolana miendrika S, dia manana teboka malemy ao amin'ilay rojo ary vaky izy - eny, ary hasehonao ahy ity milina fitarafana tsy mampino ity. Lazao amiko ny amin'izany, koa --- eny, tsara izany, amin'ny fitsangatsanganana izahay 'Tena nanam-bintana aho fa manana milina taratra X amin'ny faran'ny dingana tsirairay. Tsy manao izany amin'ny hazakazaka maro izy ireo.
Ny Giro no manao an'io, saingy mieritreritra aho fa ireo hazakazaka roa ireo ihany, matetika rehefa 'Miahiahy momba ny vaky izahay, avy eo tena mitady toerana vonjy maika, hopitaly. Mitaky lojika io. Ny fahasitranan'ny mpamily sy izay ananany rehetra dia mety maharitra fotoana maharitra.
Manana tombony fanampiny isika ankehitriny amin'ny fananana ireo fitaovana ireo, ny milina fitarafana izay afaka mandinika mora foana ireo taolana ambonin-javatra toy ny taolana, afaka mijery ny hatotan-tanana, ny tanana ary manipy ny tongotra Inona no tadiavintsika ho hita? Tànan-tanana. - Scaphoid? - Taolana scaphoid, andao jerena ny tadin'ny distal etsy sy eroa mankany amin'ny taolana scaphoid. Ary toy izany koa, ity gel ity dia ahafahan'ny onjam-peo mivoaka avy ao amin'ny transducer hafindra amin'ny hoditra. midina amin'ny alàlan'ny taolana na midina amin'ny taolana ary omeo anay ny sarin'ny korteks ao.
Ary hitanao fa tsara sy mitohy ity ary afaka mihetsika mandroso sy miverina aho. Ary hidina izahay, raha manana tapaka ianao dia ho hitantsika fa eo amin'izay tena mitohy io tsipika io dia hisy ny fipoahana, azo tsikaritra ihany - okay Kevin, azafady azafady mba mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny tanana - ary lazao ny ratra amin'ny tanana ? - Azo antoka, noho izany dia niresaka momba ny kôlôzôra isika ary inona ny antony mahatonga ny mpitaingina karazan'olom-bolo sy hidina amin'ny tànana ahinjitra ary ny taolana vozon-tranonjaza dia mazàna maka izany, fa araka ny azonao an-tsaina dia ny tanana sy ny tanana , Tiako holazaina, nianjera tamin'ny tany izy ireo. Mety handratra hoditra ianao, mazava ho azy, fa ny taolana misy ny tanana sy ny taolana madinidinika eo am-pototry ny tanana dia toy ny toerana ahitan'ny tanana ny hatotanany matetika koa ireo iharan'ireo latsaka ireo.
Ny radius dia ny taolana eto amin'ny sisin'ny ankihiben-tànana, ny ilan'ny tànana misy ankihibe, ary avy eo dia tapitra eto ny ulna. Ny taolana scaphoid dia taolana kely mipetraka tsara ao amin'ity divot ity - eny - ary maratra koa izy io matetika. Ka rehefa midina ny mpitaingin-tsoavaly iray dia matetika isika no mijery ireo taolana ireo, amin'ny taolam-paty ary amin'ny tendons --- eny. - Manodidina eo izany, ary avy eo ny taolana eo am-pototry ny tanana.- Eny.- Nefa ny sasany amin'izy ireo dia sarotra sitrana, ka misy olona tsy mitondra fiara miaraka aminy.
Ho lany amin'ny fihazakazahana ianao. Saingy io taolana kely scaphoid io, noho ny fomba fidiran'ny rà dia tonga tokoa izy, midina ny rà mandriaka, mamaky ny taolana ary avy eo miverina mankany aminy, ka raha vaky ny taolana azonao atao dia azonao atao ny manapaka ny famatsian-dra, miharihary fa manasarotra, raha tsy azo atao, ny manasitrana. Na ireo vaky kely ireo aza dia indraindray fandidiana ka te hahita azy ireo aloha ianao - ka lazao amiko ny momba ny lohalika.
Iray amin'ireo zavatra vitsy tsy nety nataoko hoe meon bisikileta io, ka (mihomehy) - Tonga lafatra! Tsy misy lohalika, mazava ho azy fa misy ratra mampivadi-po amin'ny lohalika, ka lavo eo amin'ny bisikileta ianao, mikapoka ny lohalinao, olana iray izany, nefa marina, huh? Hitako bebe kokoa ny lohalika izay iharan'ny ratra be loatra.
Ary midika izany fa mety misy tsy fifandanjan'ny hozatra e na olana eo amin'ny toerany. Matetika izy roa. Miankina amin'ny antony ny fitsaboana.
Ary midika izany matetika fa mihemotra ary mijery ny fihetsik'izy ireo, mijery ny maodelin'ny heriny, mijery ny mety aminy. Nanova ny vatany ve izy ireo? Nanova ny haavon'ny lasely ve izy ireo? Matetika izy ireo dia mety tsy nahavita nanao an'izany zavatra izany, ka dia nivoaka izy ireo ary niverina tamin'ny bisikiletany tany an-trano ary nipitika kely ny seza fipetrahana ary nasainay nandrefy azy ireo ary toy ny, ah, roa santimetatra io midina na iray santimetatra na inona na inona mametraka ny lohalika ary inona no maharary .- Kevin, fikorontanana, tadidiko tsara izany rehetra izany.
Tena tsy mahazo aina. Miresaka aminay amin'ny alàlan'ny aretina, ary avy eo inona no tokony hatao amin'ny mpamily manana fikorontanana - Ka ny fikorontanana dia zavatra iray azo antoka fa misy fiatraikany amin'ny bisikileta, ary zavatra hitantsika mandritra ny taona, ary zavatra ataontsika ao amin'ny Tena nianarantsika tao anatin'ny dimy ka folo taona amin'ny maha-tobim-pitsaboana antsika izay mila mila ataontsika matotra kokoa. Tamin'ny fianarako, ny fizahana aretina sy ny fitsaboana ny concussion dia ampahany lehibe tamin'ny piozila fanabeazana ary zavatra nifantohanay be dia be.
Ary heveriko fa hitanao amin'ny bisikileta fa hita taratra izany, fa eo am-panaovanay ireo fotodrafitrasa ireo dia manomboka tsapantsika izany ary ny fahafantarana bebe kokoa azy io dia mety ho sarotra satria ny fitiliana ny sombin-tsofina dia mitombina izay midika fa tsy misy fitsapana. izany dia milaza amintsika fa misy olona voan'ny kandrina. Tsy azonao atao ny maka scan azy ireo, tsy afaka manao fitsapana ra ianao, ary avy eo tena zava-dehibe ny manamarina ny fandanjalanjany, mijery ny fitadidiany sy ny fahatsiarovany azy izy io, ary mijery ireo soritr'aretina nolazain'izy ireo taminay. Ka amin'ny lafiny iray dia ao amin'ny famindram-pon'izy ireo isika amin'izay lazainy amintsika. - Sarotra amiko ny maka sary an-tsaina ny fomba, amin'ny maha dokotera anao, azonao atao, sarotra loatra ny mamantatra an'ity karazana f ity na manandrana farafaharatsiny mahazo ny diagnostika voalohany amin'ny tsindry ataon'ny fotoana, satria na dia mety tsara aza izany ho an'ny mpijery antsika Mety ho azo antoka fa tsy hiala nenina Mety ho toa izany ianao, ahoana raha misintona olona iray amin'ny andro fahatelo amin'ny Grand Tour ianao dia ataony izany? Tsy misy fikorontanana? Satria mety nokapohinao ny lohanao dia tsy azonao atao izany, tsy rariny ho an'ny ekipa na ny mpamily.- Tsia- Ary noho izany dia tokony hampiasa ny fisalasalana ianao hanohizana, hanombohana, vinavina I.- Alefaso soa aman-tsara aho.- Eny. - Raha manana ahiahy aho --- Eny.- Raha misy tsy mety dia ataovy.- Eny.- Ary raha toa aho ka mitaona olona tsy misy maratra, na dia tsy tokony hitranga aza aho dia aleoko mandray an'io fanapahan-kevitra io.
Ankehitriny dia handany ahy izany. (mihomehy) - Eny - Raha miverina amin'ny hotely isika ary milamina ny zava-drehetra, handaka ny tenako aho, saingy aleoko mamerina azy ireo hidina sy handroaka ahy noho ny antony hafa. - Eny - Ny zavatra sarotra hafa momba ny fikorontanana dia soritr'aretina, izay miseho matetika rehefa mandeha ny fotoana. - Eny.- Raha ny fanandramako dia tsy mahazatra loatra ny hidinan'ny mpitaingin-tsoavaly iray, hokapohiny ny lohany ary hijoro eo amin'ny bisikileta izy ary avy hatrany dia misy soritr'aretina mikorontana.-Eny.
Kevin, misaotra betsaka, nahaliana ny vahoaka izany ka ny maratra mahazatra hitan'ny mpitaingina matihanina dia mety ho maresaky ny arabe, tapaka ny valan-javaboary, ratra eo amin'ny hatoka, aretin-koditra ary marary lohalika ary mieritreritra aho fa mitovy ihany angamba izany ho an'ny ankamaroan'ny bisikileta fialamboly. tsara. Manantena aho fa nahaliana anao ity. Kevin, misaotra anao indray ary mirary soa ho an'ny fitsaharan'ny fitsidihana.- Misaotra anao.- Raha tianao ity lahatsoratra ity, omeo thumbs up izahay, tsindrio 'Subscribe' ary kitiho eto raha hijery atiny fitsidihana bebe kokoa.
Iza no diso raha mamely bisikileta ianao?
Fa abisikiletany lozam-pifamoivoizana dia saika vokatry ny tsy fitandreman’olona.RAHAny antoko tsy miraharaha anyfany lozam-pifamoivoizana dia ny mpamily, (na masoivohon'ny governemanta tompon'andraikitra amin'ny lalana, na koa ny mpanamboatra kilemainabisikiletavokatra), nyhazakazaka am-bisikiletamanan-jo ara-dalàna hatao tambiny noho ny ratra nahazo azy.
Ka nandeha bisikileta niasa aho nanomboka tamin'ny faha-18 taonako. Izaho dia sendra banga vitsivitsy niaraka tamin'ny mpamily, olona anaty fiara, fantatrao fa haneno anao ny olona rehefa miakatra eny afovoan'ny arabe ianao, na hitaraina aminao izy ireo hoe: 'Mivoaha amin'ny arabe!' Zavatra toy izany.
Nianjera tamin'ny bisikileta im-betsaka aho, araka ny nahim-poko manokana, fa hatramin'ny farany teo dia mbola tsy tratra mihitsy aho. Iray volana lasa izay dia voadonan'ny vehivavy iray nitondra fiara sedan kely Honda aho ary nitondra maintso teo afovoan'ity làlan'ny bisikileta feno sary bisikileta kely ity, heveriko fa sarotra be ny tsy hitako, saingy mbola nitazona ahy ihany izy tonga saina fa tsy tena nieritreritra izay hatao aho rehefa voadonan'ny fiara amin'ny bisikiletanao. Rehefa afaka manao na inona na inona mihitsy ianao, ary ny mpandeha bisikileta dia tsy miala matetika amin'ireo zavatra ireo.
Ka nandeha tany amin'ny Departemantan'ny polisy ao Seattle aho mba hitady haingam-pandeha haingana, raha nisy izany, izaho sy ny mpanafika iray dia nahazo izany marina. Fantatrao fa faly aho fa nijanona izy. Ny fihetsiko teo no ho eo dia ny fitsambikinana fotsiny teny amin'ny arabe niantsoantso 'FUCK' hatrany rehefa nipetraka tao anaty fiara nipetrahany izy, somary nanontany tena hoe inona no nitranga teto an-tany.
Mba hahaliana ny adrenalinina, indraindray dia tsy maintsy mirehitra kely ianao alohan'ny ahafahanao miresaka mahira-tsaina. Ka noho izany - ka ny ampahany amin'ny resaka manan-tsaina dia tsy nisy mihitsy. Voaro ny fiara, ka tena nieritreritra fotsiny aho hoe: 'Fotoana hialana amin'ny lalana.' Somary mijery ambany izy ary mahita ahy mihosin-dra ary lasa hatsatra toy ny ravina.
fuji transonic 2.8 famerenana
Ary fantatrao, karazan-javatra notsapaina aho. Toa niasa ny sandry roa. Noraisiko ny bisikiletako, karazan-doko ny kodia, dia nody aho.
Tsara, arosoko ity manaraka ity. Raha tratry ny tratra ianao dia miezaha ho tony ary avelao izahay hikirakira azy avy eo, ary avy eo izahay hiezaka hanana ilay resaka malefaka sy milamina kokoa rehefa tsy ianao no ozona amin'ny fanozonana rehetra fa ny mpamily hafa rehetra kosa miangona ao aorianao. Satria tsapanao izany fanerena izany, ilay fanesoana mahery setra an'i Seattle.
Tena misy io diky io. Io, andriamanitro, tsapanao izany satria efa nataonao taloha. Rehefa niteny ianao hoe: 'Io lehilahy io, io lehilahy io!' Mialà fotsiny amin'ny arabe ary miantso ny 911.
Heveriko fa tena nanao ny zavatra Seattle mahery setra. Miaina miaraka amin'ny henatrao. Miaina miaraka aminy.
Nahita ny fijeriny aho, hitako fa fotsy daholo ny tarehiny rehefa hitany fa nandeha ra be erak'ilay toerana aho ary nieritreritra aho hoe: 'Eny, eny - eny, mihinana izany ianao. Izany no nataonao tamiko. ' Voadonan'ny fiara teo am-bisikileta ianao taloha? Uh, izaho - nisy olona nisintona anao hiala ny toeram-piantsonan'ny Trader Joes fa tsy nahita ahy.
Ary somary nanao vatolampy malama aho, Starsky & Hutch nanakodia ny tampony, nahavita nidina tamin'ny tongotro aho, nanisy rangotra lehibe teo amin'ny fiaran'izy ireo niaraka tamin'ny kiraroko Inona no nataonao? Mieritreritra aho fa nijoro teo niantsoantso hoe: 'Heyyyy.' Ary nikiakiaka izy hoe: 'Miala tsiny!' ary lasa nandeha. Nisy ny fahatsapana ho meloka lehibe.
Eny eny, matavy aho. Matavy toa hitako Hitanao izao ve aho? Ianao ve - mbola manana toa tena tsara aho, plaster iray fotsiny aho izao. Fa nitady tavoahangy Neosporin iray manontolo tao aho nandritra ny fotoana kelikely, boaty vita amin'ny gazy.
Tena mino aho fa manana taolana vaovao eo amin'ny kiho. Toy ny satrok'eliko io. Moa ve - Mihevitra aho fa tsy maninona.
Fa tsy dia mampihomehy be? Tsy mampihomehy. Subtitled an'ny vondrom-piarahamonina Amara.org
Iza no tompon'andraikitra raha bisikileta no mamely fiara?
RAHAny lozam-pifamoivoizana dia nitranga teny an-dalana ho any na avy niasa, na tany am-piasana, dia manondro ihany koa fa mety ho voasaron'ny fiantohan'ny mpampiasa azy ireo izy ireo.RAHAnyhazakazaka am-bisikiletamanana fiantohana tsy ampy dia mety ho mora kokoa ny mitaky fiantohana anao ary avelao ny orinasa fiantohana handray andraikitra na iza na izaiza no tompon'andraikitra.
Mety ho tompon'andraikitra amin'ny lozam-pifamoivoizana ve ny bisikileta raha ny fahitana azy amin'ny tanàna lehibe amin'ny tranga sasany, mety ho somary sosotra aza ny mpitondra môtô fa misy mpitaingina bisikileta sasany manadino ny fatiantoka fifamoivoizana vitsivitsy, fa ny mpitaingina bisikileta sasany kosa dia manana fankahalana kely loatra amin'ny mpamily fiara. , satria matetika izy ireo toa tsy te hizara ny sasany, raha tsy izy rehetra, na inona na inona tsy fahazoan-kevitra, dia mety samy tompon'andraikitra amin'ny fandraisana anjara na miteraka lozam-pifamoivoizana eny an-dalana ny mpitaingina bisikileta ary matetika izy ireo amin'ny toerana tsy mampidi-doza rehefa mandeha fiara mandeha haingana sy lehibe kokoa izy ireo. Na manao ahoana na manao ahoana ny fahalemen'ny bisikileta, dia voatery mankatoa ny lalàna mifehy ny lalana tahaka ny mpitondra moto izy, midika izany amin'ny farany fa mila manome lalana an'ireo mpandeha ny mpitaingina bisikileta Sorohy ny hetsika tsy azo antoka eo anelanelan'ny lalana ary tokony hankato ny jiro fifamoivoizana ihany koa izy ireo. ary manao sonia hoe rahoviana ary raha tara amin'ny iray amin'ireo lalàna mifehy ny fifamoivoizana ny mpitaingina bisikileta iray, dia azo tompon'andraikitra ilay mpitaingina bisikileta izay midika fa mety ho tompon'andraikitra tamin'ny ratra nahazo olona iray hafa izy raha ny tsy fitandremana sy ny tsy fitandremana no resahina rehefa mamaritra hoe iza no tompon'andraikitra amin'ny lozam-pifamoivoizana tapaka amin'ny bisikileta Ny teny hoe tsy fitandremana dia matetika ampiasaina ie
H. olona mitondra fiara amin'ny karazan-karazany rehetra toy ny fiara, bisikileta na kamio dia adidin'ny fikarakarana amin'ireo mpampiasa lalana hafa, raha misy olona tsy miraharaha ny fikarakarana azy, dia ho hita fa tsy mitandrina izy raha misy olona hafa naratra avy eo. amin'ny fampiasana ny tsy fitandremana amin'ny fanombanana hoe iza no tompon'antoka tamin'ny lozam-pifamoivoizana tamin'ny bisikileta, ny fanjakana tsirairay dia manaraka ny kinovan'ny fitsipiky ny lesoka iraisana izay mampiseho fa ny tsy fitandreman'ny mpitory dia afaka mandray anjara amin'ny lozam-pifamoivoizana na dia kely aza ny anjara birikiny lasa mpitory. amin'ny fitoriana azy ireo dia mety ho henjana tokoa ity rafitra ity, saingy ny vaovao tsara dia ny Washington DC, Maryland, Alabama, Virginia, ary North Carolina ihany no nampihatra io lalànan'ny tsy fitandremana io rehefa misy fanjakana manara-dalàna. eo amin'ny antoko rehetra, ohatra
Ohatra, Trevor dia teo amin'ny fihaonan-dalana ary nanao fihodinana havia nefa tsy nahita an'i Phillip, izay teo amin'ny lalan'ny bisikiletany teo imason'i Trevor, ka nivily lalana i Trevor. Ny fiarany Trevor dia afaka milaza fa i Phillip dia tompon'andraikitra amin'ny fitsorahana eo alohany rehefa mihodina miankavia, fa raha ampiharina ny fitsabahan'ny tsy fitandremana dia mety hihena ny tompon'andraikitra amin'i Philips raha hita fa i Trevor ihany koa no tompon'antoka tamin'ilay loza. Ny andraikitra tsy mitandrina tsy mitandrina dia mizara arakaraka ny isan-jaton'ny lesoka, izany hoe raha tompon'andraikitra 30% ny mpitondra bisikileta dia tokony ho tompon'andraikitra 70% ny mpitaingina raha toa ka izany ny tranga. Ny fahasimbana totalin'ilay bisikileta dia mety 10 dolara aotra aotra aotra aotra ohatra ny bisikileta dia afaka manangona $ 7000 amin'ny mpamily.
Io fetra io dia mazàna 50 isan-jato, izay midika fa raha mpitory no tompon'andraikitra mihoatra ny 50 isan-jaton'ny loza dia voasakana tsy hangataka na inona na inona avy amin'ny voampanga ny mpitory mba hiteraka lozam-pifamoivoizana Ary koa tadidio fa ny fiara sy ny fiara hafa dia betsaka lehibe kokoa noho ny bisikileta. Tokony ho tadidinao ihany koa fa ny mpamily ireo fiara ireo dia voaaro kokoa noho ny amin'ny fotoana rehetra misy bisikileta mivoaka sy manodidina. Toaka alohan'ny mitaingina bisikileta.
Ireo mpitaingina bisikileta dia tokony hanome toky ihany koa fa hitan'ny mpitondra moto araka izay azo atao izy ireo amin'ny fitafiana miloko maivana sy jiro tsara amin'ny bisikiletanao, fitaovana iray manandanja hisorohana ny lozam-pifamoivoizana mahafaty ho toy ny aroloha, raha sendra lozam-pifamoivoizana ny mpitaingina bisikileta ary tsy nitafy aroloha, tsy azo inoana fa hahazo fanambarana avy amin'ny mpitaingina azy izy ireo, na dia diso aza ilay nitaingina azy
Fahatafintohinana ve ny varavarana bisikileta?
Fehiny, fiara manokatra fiara ny fifamoivoizanany alalan 'ary mamely ahazakazaka am-bisikiletadia anFandikan-dalàna.
Salama daholo, Steve ity, hizara tantara manokana momba ny fomba fampiasan'ny polisy lalàna tsy voafehy aho mba hanasaziana ireo olona izay manamafy ny zon'izy ireo. Tany amin'ny Fitsaram-paritr'i Maryland aho herinandro vitsivitsy lasa izay ary voarohirohy tamina tranga iray tamin'ny volana jona lasa teo nizara ny porofo nomen'izy ireo ilay olon-dratsy voampanga fa naka sary vatan'ny polisy polisy Montgomery County roa izay efa nahazo ny horonantsary horonantsarin'ny manamboninahitra voarakitra an-tsarimihetsika miaraka amin'ny finday avo lenta, nahatonga azy ireo hitolo-batana farafaharatsiny iray amin'ireo fiampangana heloka bevava ireo. Andao fotsiny handeha any amin'ny vatan'i Officer Christopher Brown CamFootage satria izy no polisy nanintona ahy dia napetrako ianao satria nandalo ny takelaka fijanonana ianao teo amin'ny arabe dia tsy maintsy mankatò ny fitsipiky ny làlana azonao IDokay ilaiko ianao ny mombamomba anao momba an'io Quote Steve Silver Man Steve manana sanda V na pH io, ka 2v dia ny Fullillegal anao na ny Steve n hitanao aho niresaka tamin'ny tovolahy nataoko, voasambotra izany ary omenao ianao noho io Ny tapakila satria nijanona tamin'ity mari-pamantarana fijanonana ity aho, ny zava-drehetra eto dia noraketiko fa tsy najanonao teo aloha ny fijanonana izay tsara ianao yeah tsy najanonao ilay iray alohan'ny tsy hitenenako anao ny fomba hanaovana ny asanao raha toa ianao ka hanasazy aho, nitaizanao te-hanazava anao, manasazy anao aho amin'ny alàlan'ny familiana fijanonana mba hahafahantsika mazava ary izany no hany fomba mazava ananantsika, ny manam-pahefana Br dia nanasazy ahy taratasy fiantsoana heloka bevava noho ny tsy nijanonako. teo amin'ny mari-pamantarana fijanonana raha nitaingina bisikileta tamina faritra onenana mangina aho, izay nitranga tampoka Ary rehefa nahita ahy niresaka tamina tovolahy mainty iray aho, ny manamboninahitra Brown sy ny sakaizany tamin'ny fotoam-piambenana teo aloha izay nolazaiko ka hatramin'ny fijanonako amn'ny manamboninahitra Brown izay tsy nankasitrahany ny fandavako haneho aminy ny karapanondronay saingy noho ny nitazomana ahy dia nomeko izy no nitazona ny anarako feno ary handefasan'ny distrika ahy ny quote, tokony ho io no faran'ny tantara, saingy nanana eritreritra hafa ireo manamboninahitra, okay, tsy afaka miresaka an'i Officer Brown sy ny heviny momba ny fampitahorana aho, saingy miahiahy aho fa diso ny zon'ny lalàm-panorenako noho ny tsy firaharahiany ny fahefany ary rehefa niantso ahy izy dia nanao an'io fifanakalozana io niaraka tamin'ny mpiara-miasa aminy Corporaly Jason Hall Cow aho.
Eny, tsy manan-jo hanoratra ianao raha ajanona sy migadra noho ny fandikan-dalàna. Marina ny teniko, ary diso ny kaporaly Hal Co tamin'ny fanapahana an'io olana io alohan'ny nanatsoahan-kevitry ny fitsarana federaly rehetra tao amin'ny fanjakana fa ny sarimihetsika ataon'ny polisy imasom-bahoaka dia arovan'ny Fanitsiana Voalohany. Raha tsy ara-dalàna ny fampidirana azy eto, Corporal Hal Co dia mety nanome baiko ara-dalàna ahy hijanona, saingy kosa izy no nanao izany, zon'ny fanovana voalohany handraketana Oh manana sticker sticker amin'ny fisoratana anarana County County mpivady bisikileta sticker iray fisoratana anarana ho an'ny bisikileta, eny, henonao izany tany MontgomeryCounty Maryland raha tsy nitory ny bisikiletanao tany amin'ny polisin'ny distrika ianao.
Afaka misambotra anao sy maka ny bisikiletanao izy ireo. Raha ny momba ahy dia nanapa-kevitra ny tsy hisambotra ahy ny manamboninahitra Brown, ary nandresy lahatra azy ny Corporal Hall Cove mba haka ny bisikiletako, saingy notazonin'izy ireo tamina fiampangana heloka bevava aho satria tsy nanoratra ny bisikiletako ary tsy nifandray tamiko taoriana kelin'izay. Nahazo subpoena avy amin'ny fanjakan'ny Maryland aho mba hiatrika fitsarana na hipetraka am-ponja mandritry ny folo andro. Tsy te-hiafara amin'ny firaketana heloka bevava amin'ity hadalana ity aho, noho izany dia nanakarama mpisolovava mpiaro tena aho ary nankany amin'ny fitsarana ary soa ihany ho ahy, samy tsy teo ny manamboninahitra Brown sy ny koporaly Hal Co tamin'io andro io, ary rehefa nitantara ny mpisolovava ahy ny Niampanga azy fotsiny ny mpitsara ary tsy nino izy ary nihorakoraka ny mpampanoa lalàna rehefa nandatsaka ny fiampangana azy ho mpisolovava lehibe izy, fa tsy mila mitady fikarakarana zaza aho na hamoy ny asako mandritra io fe-potoana fitsarana io hipetrahako, fa ho an'ny ankamaroan'ny voampanga hitako teny amin'ny tribonaly, ny tsy zava-misy eto dia ny eritreritro farany momba ny mpanao lalàna ho an'ny mpitondra polisy ary ho antsika sisa mpanao lalàna, azafady, atsaharo ny fandaniana lalàna izay manome hery bebe kokoa ny polisy hanomezana olona hisambotra sy hisambotra olona satria tsy ho hitan'ny polisy izany. fomba famoronana hampiasa ireo lalàna ireo hanimba olona amin'ny fomba tsy noeritreretinao, ary rehefa mahita ny polisy ianao ohatra dia manaova izay takian'ny lalàna mifehy ny fisoratana anarana amin'ny bisikileta.
Manafoana ireo lohan'ny polisy voaaro amin'ny lalàna ireo raha toa ka tianao ny matoky anao sy manohana anao ny vondrom-piarahamoninao, torio ny tompon'andraikitra mba tsy hanasazy izay manao fomba tsy ara-dalàna, ohatra, raha manasazy ny olona iray izay nanolo-tena azy ireo ny tompon'andraikitra dia tokony hofehezinao ny tompon'andraikitra hampihatra ny kolontsaina tadiavinao hijerena ary fantatsika rehetra fa tsy mora ny manararaotra ny zon'ny lalàm-panorenana, mety handany ny fotoanao sy ny harenanao ary amin'ny tranga tsy fahita matetika ny fiainanao, fa mametraka ny zonay tsy iray ihany izahay satria vidiny aloany ny miaina ao anaty fiarahamonina afaka dia ataovy izany satria izany no ataontsika sy hoe iza isika
Afaka mitaky familiana amin'ny mpamily ve ny bisikileta iray?
Amin'ny teny tsotra indrindra, abisikileta afaka milaza fa manohitrampitondra moto rehefa lozam-pifamoivoizana no nahatonga an'ity farany. Amin'ny tranga maro anefa, abisikileta no hanaoamina fepetra vitsivitsy omena tsiny noho ny lozam-pifamoivoizana iray, ary arakaraka ny halehibeny, ny andraikitry ny mpamilydiaho sarotra kokoa ny hametraka.
Inona no hitranga raha misy mikapoka bisikileta amin'ny fiaranao ny zaza?
Na firy taona ianao na firy na firy taona, ny lozam-pifamoivoizana dia afaka sy maniryhitranga, faraha ny zanakaosendra lozam-pifamoivoizana izy ireobisikileta, manimba fananan'ny hafa, afakanytompon'andraikitra amin'ny fahasimbana anyCalifornia? Raha farafaharatsiny, $ 25,000 fotsiny no ho tompon'andraikitra amin'izy ireo raha misy izanyny zazanahatonga.
Adidin'ny fikarakarana ve ny mpitaingina bisikileta iray?
Amin'ny maha mpampiasa lalana anaotrosaara-dalàna 'adidy fikarakarana'ho an'ireo mpampiasa lalana hafa rehetra. Anisan'izany ny mpandeha an-tongotra,mpitaingina bisikilety, mpandeha, mpitondra moto, sy ny olon-kafa rehetra izay mampiasa lalana. Ka izay mpampiasa làlana tsy mahomby amin'ny azy ireoadidy fikarakarana, ary miteraka lozam-pifamoivoizana,afakatompon'andraikitra amin'ny fahavoazana entin'izy ireo.
Afaka mitory mpitaingina bisikileta ve aho?
Ny tsy fitandremana dia, amin'ny ankapobeny, ny tsy fitandremana fikarakarana sahaza azy ao anatin'ny toe-javatra voafaritra mazava, amin'ity tranga ity ahazakazaka am-bisikiletaeny an-dàlana. Ka eny, ny valiny tsotra dia ianaoafakahoNanenjikanoho ny nahatonga loza.
Ara-dalàna ve raha manao bisikileta?
TsiaTsy Ara-dalànaHO AN'NYmpitaingina bisikileta hataofiara fa miaraka amina fampitandremana mitsikera: sanatria, mandrakizaymanatanterakafiara lava toy ny fiara fitateram-bahoaka na kamiaobe voarindra raha tsy efa mijanona tanteraka ary hijanona mandra-pahatonganao soa aman-tsara. Raha misy fisalasalana, aza manandranamanatanteraka.
Afaka misongona ankavia ve ny bisikileta?
nandrendrikaary sivana amin'ny alàlan'ny filaharana fifamoivoizana rehefaBisikileta
Ara-dalàna tanteraka ny fanivanana amin'ny alàlan'ny fifamoivoizana. Aza manao an'izanynahatratrafivezivezena eo amin'nyANKA, ary tsy sanatrianahatratrafiara lava eo amin'nyANKA. Raha tsy nahita anao ny mpamily dia mety ho torotoro ianao raha mihetsika ka lasaANKA.
Inona no hatao raha voadonan'ny fiara ny bisikiletanao?
Hamarino tsara fa manana ny fampahalalana ny polisy alohan'ny hiaingan'ny mpamily. Izaho dia nahita ny lozam-pifamoivoizana tamin'ny bisikileta nifanandrinan'ny fiara, ary niaiky ilay mpamily fiara fa nitondra ny jiro mena ary nahatonga ny loza. Nomeko ny mpitaingina bisikileta ny karako ary nilazako taminy fa vavolombelona aho ary mitaingina jiro maitso izy.
Ahoana ny fomba fiatrehana lozam-pifamoivoizana amin'ny bisikileta miaraka amin'ny fiara?
Raha misy vavolombelona eo an-toerana dia angataho koa ny anarany sy ny nomeraon-telefaon'izy ireo. Toy ny lozam-pifamoivoizana, aza miaiky ny diso, ary aza ahena ny ratra na ny simba amin'ny bisikiletanao. Tsy misy antony. 'Mba hiarovanao tena ny antony ifanakalozanao vaovao,' hoy i Duggan.
Inona no hatao raha mahazo tapakila amin'ny bisikileta ianao?
Tsarovy izany ary lazao amin'ny polisy fa fantatrao ny lalàna momba ny mpitondra bisikileta sy ny fiara môtô ary ny antony tokony hanomezana tapakila ny mpamily.